के तपाईंको सास गन्हाउँछ ? त्यसोभए यसो गर्नुस – Jaljala Online
डा. प्रकाश बुढाथोकी । तपाईंसँग गफ गरिरहेको बेला कसैले मुन्टो बटार्छ भने सम्झनुस्, तपाईंको सास गन्हाएको पनि हुन सक्छ। अरूसँग हाँस्दा र बोल्दा नै सास गन्हाउन थाल्यो भने कोही पनि नजिकिन चाहँदैन। सास गन्हाउनु अस्वस्थताको संकेत हो।
सास गन्हाउने अवस्था हटाउन चुइनगम, मिन्ट, फ्य्रागरेन्ट डेन्टिफ्राइस, डियडरेन्ट, माउथवास, ल्वाङसुकुमेल र स्प्रे प्रयोग गरेको पाइन्छ। अस्थायी उपचारले कम भएको जस्तो भ्रम परे पनि रोग भित्रभित्रै बढ्दै जान सक्छ। थप जटिलता उत्पन्न हुन गई उपचार नै हुन नसक्ने रोग लाग्ने जोखिम हुन सक्ने भएकाले समयमै विशेषज्ञ परामर्श लिनु राम्रो हुन्छ। -अन्नपूर्ण पोष्टबाट
डा. बुढाथोकी न्याम्स वीर अस्पतालका वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट डेन्टल सर्जन हुन्